တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွ
2018-1-18 17:40| 发布者: 缅甸新闻网| 查看: 183| 评论: 0
摘要: တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဦးစားပေ&# ...
တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မှ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်မည်
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်
တိုင်းရင်းသား အရေး၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများ ဖွံ့ ဖြိုးရေးတို့ ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမှသာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကျင်းပသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်မှု ဖိုရမ်သို့နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ ခဲ့သည်။
…. “တိုင်းရင်းသား အရေး၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများ ဖွံ့ ဖြိုးရေးတို့ ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမှသာ လက်တွေ့ တိုးတက်မှု သာဓကများနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ပြီး ပြည်ထောင်စု ညီညွတ်ရေး ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်” …. ဟု သ၀ဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်မှု ဖိုရမ်တွင် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဗန်ထီးယူ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ရာ … “ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ဖိုရမ်ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေ ဗဟုသုတတွေ ရရှိ ဖော်ထုတ်နိုင်စေဖို့ကျင်းပတာ ဖြစ်လို့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖိုရမ်ဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်တဲ့ တောင်တန်းဒေသ တွေမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့အတွက် စီးပွား လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ဖို့အခြေအနေ ဖန်တီးခွင့် နည်းပါးပြီး စီးပွားရေး အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီပြသနာတွေကို ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ ဘယ်လို အခက်အခဲ ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမဆို တိုင်းရင်းသား အားလုံး နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးမှု အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ရင် အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါ တယ်” … ဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နေပြည်တော် မင်္ဂလာသီရိ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် အဆိုပါ ဖိုရမ်သို့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်နှင့် အတူ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ၀န်ကြီး များ၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ၀န်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း / ဒေသ ဦးစီး အဖွဲ့ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့ များ၊ နိုင်ငံ တကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဖိုရမ်အား ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ နှစ်ရက်တိုင် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
上一篇：ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အမည်စာရင်းတင&#下一篇：ရခိုင်ပြည်နယ် ကင်းချောင်းတံတားဆောက်ရန&#
GMT+8, 2018-3-21 16:48 , Processed in 0.269550 second(s), 17 queries .